Misy lalàna mahatsikaiky mamehy ny firaisana ara-nofo
Tena zava-dehibe izany firaisana ara-nofo izany, ka tsy azo ataotao foana. Izany koa no mahatonga ny lalàna ho sarotiny amin’ireo tsy manaja ny maha-olona,
na manararaotra, ao anatin’izany firaisana ara-nofo izany. Fa indraindray koa, misy lalàna hafahafa, toa mampihomehy ihany, any amin’ny firenena sasany, mamehy izay firaisana ara-nofo izay. Santionany ireto…
· Any Virginie Etazonia dia voarara ny manao firaisana ara-nofo ao anaty hazavana. Araka izany, tsy maintsy vonoina foana ny jiro amin’ny alina, raha hiray ara-nofo.
· Any Colombie, ny firaisana ara-nofo voalohan’ny vehivavy dia tsy maintsy ataony miaraka amin’ny vadiny ihany. Manatrika izany firaisana ara-nofo izany ny renin’ilay vehivavy, mba ho fanamarinana fa io tokoa no voalohany.
· Any Utah Etazonia, tsy mahazo manao firaisana ara-nofo ao anaty “ambulance” ny vehivavy. Raha mandika izany lalàna izany izy dia avoaka an-gazety ny sariny mba ho fantatry ny olona rehetra ny zavatra nataony.
· Any Minnesota, ny olombelona rehetra dia raràn’ny lalàna tsy hanao firaisana ara-nofo amin’ny trondro maty. Tsy voaresaka kosa ny mahakasika ny trondro velona !
· Any Oregon, voararan’ny lalàna tsy hahazo hiteny ratsy ny lehilahy, rehefa eo ambony fandriana miaraka amin’ny vadiny.
· Any Iowa, raràn’ny lalàna tsy hisotro izay labiera tiany holaniana ny lehilahy, rehefa eo am-pandriana miaraka amin’ny vadiny. In-3 migoka ihany dia ampy !
· Any Washignton D.C, tsy misy paozy eken’ny lalàna hataon’ny mpivady mandritra ny firaisana ara-nofo, afa-tsy ny “missionnaire” (vehivavy matory mitsilany, matory eo amboniny ny lehilahy) ihany !
· Any Kalifôrnia, voararan’ny lalàna tsy hiray ara-nofo ny alika, na ny saka, fa mila maka taratasy fanomezan-dalana mialoha.
· Mbola any Kalifôrnia ihany, tsy mahazo miray ara-nofo amin’ny omby ny vehivavy, raha tsy hoe : firaisana ara-nofo iarahan’olona 3 angaha (ka omby ny iray !)
· Any Liban, tsy azon’ny lehilahy atao ny miray ara-nofo amin’ny biby… lahy ! Fa tsy maninona raha vavy ilay biby. Famonoana ho faty no sazy miandry izay mandika io lalàna io.
· Misy dokotera “gynécologue” lehilahy any Bahreïn, saingy tsy azon’izy ireo atao ny mijery mivantana ny taovam-pananahan’ny vehivavy. Tsy maintsy mampiasa fitaratra izy ireo, rehefa hanao fizahana.